I-PSA oxygen generator isebenzisa i-zeolite ngesihlungo samangqamuzana njenge-adsorbent, futhi isebenzisa umgomo wokudonswa kwe-adsorption kanye ne-decompression desorption ukukhangisa nokukhipha umoya-mpilo emoyeni, ngaleyo ndlela kwehlukaniswe i-oxygen nemishini ezenzakalelayo. Ukwehlukaniswa kwe-O2 ne-N2 nge-zeolite ngesihlungo samangqamuzana ...
UMongameli WaseKorea uWen uhlangane nophiko lwami uDing Zong eYin
UMongameli uMoon Jae-in waseNingizimu Korea uhlangane noMnu uDing wophiko lwethu, enethemba lokuthi kuzoba nokubambisana okungcono nokuthe xaxa ngokuzayo. Kuyithemba enkampanini yethu nasemkhiqizo wethu. Masibe nokuzethemba okwengeziwe kokwenza imikhiqizo engcono futhi siyidayise emhlabeni wonke. ...
Idizayini yethu yedivayisi ye-oxygen / nitrogen
Idizayini ye-Oxygen / Nitrogen Plant isuselwa ku-Liquification of Air ngokususelwa kumjikelezo wengcindezi ophansi naphakathi. Ikholomu lokuhlukanisa umoya linamathileyi we-state-of-the-art BOSCHI distillation, ama-multipass exchange & condensors ukuthola isivuno esikhulu somoya-mpilo ngokuhlukanisa ...
"Umbiko we-Intellect uhlinzeka ngombiko wakamuva wokuhlaziywa kanye nesibikezelo semakethe yemishini yokuhlukanisa umoya kusuka ngo-2020 kuya ku-2026. Umbiko unikeza imininingwane ebalulekile futhi unikeza amakhasimende ithuba lokuncintisana ngemibiko enemininingwane. Ngaphezu kwalokho ...
I-DBMR ingeze umbiko omusha obizwa nge- "Air Separation Equipment Market", oqukethe amatafula emininingwane yeminyaka nokubikezela. Lawa mahebula wedatha amelwe "yingxoxo namagrafu" asakazwa ekhasini futhi kulula ukuwaqonda ngokuhlaziya okuningiliziwe. Ukwehlukaniswa komoya ...
Umbiko wemakethe yemishini yokuhlukanisa umoya, ukuhlaziywa komncintiswano, amasu aphakanyisiwe, imigomo esemqoka engaxazululwa, izidingo ezibalulekile
I-AMR (Ample Market Research) isanda kungeza umbiko othi "Air Separation Equipment Market" ohlwini lwayo olukhulu. Ingxenye ebalulekile yombiko we- "Air Separation Equipment Market Research" ibuye yaphinda izici eziningi zemakethe futhi yahlinzeka ngezimo zemakethe ezifanele, imboni ...